Entertainment News | Jukson
श्रीमान् विदेश जाँदा नेपालमा श्रीमतीलाई पर्ने पिडा देखाउँदै ‘धौली’
सलमानसँग टक्कर लिँदा यशराज ब्यानरबाट ऋतिक आउट
यशराज ब्यानरबाट २०१६ मा बन्ने नयाँ फिल्मको लागि ऋतिक रोशनको नाम चर्चामा थियो । अब भने उनी सो ब्यानरको फिल्ममा नदेखिने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । ऋतिकलाई यशराज ब्यानरले ५० करोड सम्म पारिश्रमिक दिन तयार हियो । तर, ऋतिकले सलमानले सोही ब्यानरको रेस्लिङ फिल्मको लागि पाउने भनिएको ७५ करोड बराबर नै…
बिग आईकनको दोश्रो राउण्डको अडिसन शनिबारदेखी
पहिलो राउण्डबाट १ सय १२ जना दोश्रो राउण्डका लागी छनौट पोखरा, ८ पुस | छैठौँ विग आईकन अन्तरगत पहिलो चरणको अडिसन राउण्ड मंगलबार सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको अडिसनबाट १ सय १२ जना गायन प्रतिभाहरु दोस्रो राउण्डको अडिसनका लागि छनौट भएका छन् । तीन दिनसम्म भएको पहिलो चरणको अडिसनमा ४२…
पुस ६ / मिस युनिभर्स २०१५ को फाइनलको निकै नाटकीय अन्त्य भएको छ । कार्यक्रमका प्रस्तोता स्टीभ हार्भेले विजेताको नाम गलत घोषणा गरेपछि केही मिनेटको अन्तरालमा दुई जनालाई ताज पहराउनु परेको छ । प्रस्तोता हार्भेले शुरुमा मिस कोलम्बिया एरियाड्ना गुडियारेजलाई विजेता घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गर्ने बित्तिकै स्टेजमा फूलको…
जाडोमा सुन्ताला खान हुन्छ कि हुँदैन ? यो पढ्नुहोस्
भिटामिन सी ले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लामो समय स्वस्थ रहन राम्रो डाइटसँगै फलफूल खान पनि जरुरी छ । खासगरी त्यस्ता फल जसमा जुस बढी हुन्छ । जाडोमा पानीको सेवन कम हुदाँ यस्ता फलफूल खाएर सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ । यस्ता फलफूलमध्ये सुन्तला एक हो…
छैठौँ विग आईकनको दुई दिनमा ९७ जनाले पाए ग्रीनकार्ड, तेश्रो दिन(आज) पनि अडिसन जारी
पोखरा, ७ पुस | गायन रियालिटि शो विग आईकनको छैठौँ सँस्करण अन्तरगत सोमबार भएको दोस्रो दिनको अडिसनमा ४५ जनाले अघिल्लो चरणका लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका छन् । यो सँगै दुई दिन गरेर कुल ९७ जनाले अघिल्लो चरणको लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गरे । पहिलो चरणको अडिसनको अन्तिम दिन आज…
घट्दैछ दिलवालेको आम्दानी , बाजिरावको बढ्दै
मुम्बाई – शुक्रबार रिलिज भएको दुई चलचित्र दिलवालेको कमाई दोस्रो दिन घटेको छ । यता, बाजिराव मस्तानीको कमाई भने दोस्रो दिन बृद्धि भएको छ । शनिबार घरेलु बक्स अफिसमा शाखरुख खान अभिनित दिलवालेले २०.०९ करोड कमायो भने बाजिराव मस्तानीले १५.५२ करोड कमायो । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले यस कुराको जानकारी…
पहिलो दिन ५२ जनाले पाए अघिल्लो राउण्डको लाग ग्रीन कार्ड पोखरा, ५ पुस । सामसुङ ग्यालेक्सी जे सेभेन छैठौँ विग आईकनको अडिसन आईतबार देखि शुरु भएको छ । आईतबारदेखि शुरु भएको पहिलो चरणको अडिसन अन्तरगत पहिलो दिन ५२ जनाले अघिल्लो चरणको लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गरे । आईतबार भएको पहिलो दिनको…
स्पेनी सुन्दरी मेरिया बनिन् मिस वर्ल्ड
पुस ४ । मिस वर्ल्ड २०१५ को ताज स्पेनकी सुन्दरी मेरिया लालगुना रोयोले जितेकी छन् । चीनको सान्यामा भएको प्रतियोगितामा २३ वर्षिया स्पेनी सुन्दरी टप मोडल भइन् भने ‘ब्युटी विथ पर्पस’को उपाधि इन्डोनेसियाकी सुन्दरीले जितिन् । दोस्रो स्थानमा रुसकी सोफिया निकिचुक र तेस्रोमा इन्डोनेसियाकी मारिया हरफान्ती आए । उत्कृष्ट ५…
खोजेजस्तो केटा नै पाएको छैन : शालु गौतम
पछिल्लो समय हेर्ने हो भने मोडल बन्नेहरुको लाइन निकै लामो छ । काँचको पर्दामा देखिन होस् या मोडल भनेर आफुलाइ चिनाउन होस् युवतिहरुको आकर्षण मोडलिङमा ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा रहर गर्ने त धेरै छन् तर सफल भएर चर्चा कमाउने भने कमै मात्र छन् । छोटो समयमा नै मोडलिङ…
प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीका लागि राजीनामा दिएँ: गोपालबहादुर खड्का
२५ वर्षीय नेपाली युवा म्याकडोनाल्ड्सको उत्कृष्ट म्यानेजर
पछाडि बस्नेले हेल्मेट लाउँदा १२ अर्बको व्यापार !
‘ट्वाइलेट’ र ‘प्याड म्यान’ पछि ‘गोल्ड’का साथ आए अक्षय कुमार
ताङतिङले होमकोर्टमै घान्द्रुकलाई हराए ।